Taageerada Caafimaadka Maskaxda - Rosemount-Apple Valley-Eagan ISD 196
Marka la eego cudurka dillaaca ee coronavirus (COVID-19), waxaan fahamsanahay sida ay muhiim u tahay bixinta taageerada inta lagu jiro dhibaatadan caafimaadka bulshada. Fadlan tixraac ilaha ku yaal boggan wixii caawimo ah ee wax ka qabashada baahiyaha caafimaadka maskaxda muddada waqtigan walaaca leh. Waxaa lagugu dhiirigelinayaa inaad la xiriirto la-taliyaha dugsigaaga, adeegaha bulshada, kalkaalisada ama cilmu-nafsiga si ay kuu siiso taageero dheeri ah.
Ha ka waaban inaad sameyso wicitaan noocan oo kale ah haddii aad ka shakisan tahay in qof khatar ku yahay naftooda. Waxay badbaadin kartaa qofkaas noloshiisa.
Jadwalka Ka Hortagga Ismiidaaminta ee 1-800-273-TALK (800-273-8255).
Caawinta Afka ee Af-soomaaliga >
XIRIIRAD DEGMADA DAKOTA
Kate Bartlein, Baraha Waalidka iyo Isuduwaha Mashruuca ee Isbahaysiga Qaranka ee Cudurka Maskaxda (NAMI)
Kate waxay fududeysaa kooxaha taageerada waalidka iyo walaalaha, waxay ka caawin kartaa waalidiinta inay maraan nidaamka caafimaadka maskaxda, waxay siisaa tababar ardayda, waalidiinta iyo shaqaalaha
Qaybta Jawaabta Dhibaatada ee Degmada Dakota: 952-891-7171
Degmada Dakota COVID-19 lambarka khadka tooska ah: 952-891-7834; furan Isniinta-Jimcaha 8:30 subaxnimo ilaa 4 galabnimo
KA WALWALAY CAAFIMAADKAAGA MASKAXDA:
Wac khadka diirran 651-288-0400 ama farriin Taageero ugu dir 85511 ama wac 844-739-6369
Ka wac kooxda dhibaatada deegaanka ** CRISIS ama halkan guji si aad u hesho lambarrada degmada
Adeegso Khadka Dhibaatada adigoo fariin u diraya MN 741741
Ka wac khadka caawinta dhibaatada SAMHSA Musiibada 1-800-985-5990
Xiriirada Caafimaadka Maskaxda
Khadadka taleefannada maxalliga ah iyo kuwa heer qaran
Qalabka caafimaadka dhimirka ee Iskuulka Degmada Dakota
Qalabkan waxaa loo sameeyay in lagu dhiirrigeliyo xirfadleyda dugsiga Degmada Dakota inay ka faa'iideystaan dhiirrigelinta caafimaadka dhimirka ee ku saleysan caddeynta iyo istiraatiijiyadda ka hortagga ismiidaaminta. Qalabkani wuxuu u adeegaa sidii ilaha lagu taageerayo degmooyinka iskuulada maxalliga ah si loo qiimeeyo barnaamijyadooda caafimaadka maskaxda, siyaasadaha iyo dhaqamada.
Qalabkan waxaa loogu talagalay Degmooyinka Dugsiyada Degmada Dakota, laakiin wuxuu noqon karaa ilo waxtar u leh qof walba, gaar ahaan kuwa kale ee ka tirsan goobaha bulshada ee ka shaqeynaya kor u qaadista caafimaadka maskaxda iyo fayoqabka.
Arag xirmada caafimaadka maskaxda ee Degmada Dakota >